साना विजनेशलाई सघाउन पीपीपी ऋणको प्रावधान परिमार्जन, स्वरोजगारलाई कुल आम्दानीका आधारमा « Khasokhas
साना विजनेशलाई सघाउन पीपीपी ऋणको प्रावधान परिमार्जन, स्वरोजगारलाई कुल आम्दानीका आधारमा
अल्पसंख्यक र साना विजनेशलाई सघाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम पीपीपी ऋणको प्रावधानमा परिमार्जन गरेका छन् । पूरानो नियमले सेल्फ इम्प्लोयडदेखि साना विजनेशहरुमारमा परेको र कतिपय विजनेशले जम्मा १ डलरसम्ममात्र ऋण प्राप्त गर्ने अवस्था आएकोमा बाइडेनले उक्त प्रावधानमा परिमार्जन गरेर सहज बनाएका हुन् ।
अब बुधबारदेखि सुरुहुने गरी दुईसातासम्म केबल २० जनाभन्दा कम कामदार रहेका विजनेशहरुलेमात्र पीपीपी ऋणका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कोरोनाको महामारीका कारण समस्यामा परेका विजनेशहरुलाई कामदारलाई तलब प्रदान गर्ने लगायतका खर्चका लागि सरकारले पीपीपी ऋण उपलब्ध गराएकोमा साना विजनेशहरु ठूला विजनेशको भींडभाडमा हराउने अवस्था आएको थियो ।
सुरुमा सन् २०२० को अप्रिलमा सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम गत जनवरीमा पुन दोश्रोपटक सुरुवात गरिएको थियो । दोश्रो चरणको पीपीपी ऋणका लागि मापदण्डहरु अलिक कडा बनाइएको छ भने मार्चको अन्तिमसम्म आवेदन दिन सकिने प्रावधान रहेको छ ।
बाइडेनले सोमबार परिमार्जन गरेको नियम अनुशार स्वतन्त्र ठेकेदार वा स्वरोजगारहरुले ट्याक्स फर्मको स्केजुअल सीमा रहेको कुल आम्दानी लाइनको प्रयोग गरेर ऋण लिन सक्ने भएका छन् । उबर चालकहरुले समेत यसबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । यसभन्दा अगाडिको प्रावधान अनुशार कुल आम्दानीमा ट्याक्स र खर्चहरु कटाएर बचेको रकमलाई आधार मानेरमात्र पीपीपी ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो ।
एसबीएले न्यून आय भएका समुदायका लागि सहयोग गर्न अलग्गै १ बिलियन डलर समेत छुट्याउने भएको छ । यो परिवर्तनपनि मार्चदेखि लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै गैरनागरिकहरु पनि पीपीपी ऋण लिनका लागि योग्य हुनेछन् । अमेरिकाका कानूनी रुपमा बसेका र ट्याक्स तिरेकाहरु यो ऋणका लागि योग्य हुनेछन् ।
त्यस्तै कुनै कर्मचारी नभएका विजनेशहरुले समेत पीपीपी ऋण प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । संघीय विद्यार्थी ऋण नतरिकाले लगायतलाई पीपीपी ऋण नदिने लगायतका प्रावधानहरु पनि खारेज गरिएको छ ।
बाइडेनले परिवर्तन गरेको नियम बिस्तारमा यहाँ पढ्नुहोला ।
स्वरोजगारले बेरोजगार सहायता रकमका साथमा पेचेक प्रोटेक्सन रकम लिन मिल्छ ?
कोरोनाको महामारीका कारण काम गुमाएका स्वरोजगारले पनि अहिले अमेरिकामा महामारी बेरोजगारी सहायता पीयुए रकम प्राप्त गरिरहेका छन् ।तर स्वरोजगारहरु पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तरगत ऋण लिन समेत योग्य हुन्छन् । महामारी बेरोजगारी सहायता पीयुए प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तरगत ऋण लिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
१०९९ फर्म प्रयोग गरेर रकम पाएका स्वरोजगारहरु पीपीपीका लागि समेत योग्य हुन्छन् । तर दुबै सुविधाहरु एकैपटक लिन नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । यदि बेरोजगारी विमा रकम लिइराखेको अवधिमा पीपीपी रकम प्राप्त भएमा बेरोजगारी विमा रकम दावी गर्न छाड्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।
पीपीपीले कभर गरेको अवधिमा बेरोजगारी सहायता रकम लिनका लागि व्यक्ति सावधान हुनुपर्छ । यदि पीपीपी रकम प्राप्त भएमा कुनै पनि स्वरोजगार व्यक्ति पीपीपीबाट प्राप्त रकममा भर परेको अवस्थामा बेरोजगारी सहायता रकम लिन नहुने सुझाव दिइएको छ ।
सामान्यतया पीपीपी रकम साढे २ महिनाका लागि हिसाब गरेर दिइने भएकाले रकम प्राप्त भएको अवधिको साढे २ महिनासम्म बेरोजगारी विमा रकम लिन नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । पीपीपी ऋण पेचेकका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।
स्वरोजगारहरुले ईकोनोमिक इन्जुरी डिजास्टर लोन ईआईडीएलका लागि समेत आवेदन दिनसक्छन् । तर पीपीपी ऋण सहायता पाएको व्यक्तिले ईआईडीएल ऋण समेत पाएमा रकम एउटै प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ । यदि ईआईडीएल ऋण आफ्नै पेरोलबाहेक अफिसको भाडा लगायतका अन्य खर्चमा प्रयोग गरेमा व्यक्ति बेरोजगारी सहायता रकमका लागि योग्य भइरहनसक्छ । तर यसबारेमा कानुन व्यवसायी वा एकाउन्टेन्टको सल्लाह लिन सुझाव दिइएको छ ।
कोही व्यक्तिले बेरोजगारी सहायता रकम लिइरहेको छ र यही बीचमा पीपीपी रकम प्राप्त भएमा प्राप्त भएको अवधिले रकम नसकिंदासम्म बेरोजगारी सहायता रकम लिनु हुँदैन । तर रकम सकिएपछि भने बेरोजगारी सहायता रकमका लागि पुन योग्य हुन सकिन्छ ।
बेरोजगारी विमा रकमका साथमा पीपीपी वा ईआईडीएल ऋण लिन हुने वा नहुने भन्ने सन्दर्भमा ट्रेजरी, एसबीए वा लेबर डिपार्टमेन्टले कुनै निर्देशिका जारी गरेको छैन । यद्यपी पीपीपीका बारेमा एसबीएले भनेको छ – ‘यदि पीपीपीमा सहभागि हुने व्यक्तिले सावधानी अपनाउन जरुरी छ कि उसले राज्यबाट पाउने बेरोजगारी सहायताको योग्यतामा फरक पर्न सक्छ ।’
पीपीपी लिने स्वरोजगारलाई तीन महत्वपूर्ण टिप्स
पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तरगत वा इकोनोमिक इन्जुरी डिसास्टर लोन लिने सेल्फ इम्प्लोयडलाई अमेरिकाका चर्चित नेपाली सीपीए विराज रिजालले तीनवटा महत्वपूर्ण टिप्सहरु दिनुभएको छ ।
तेश्रो, पीपीपी ऋण मिनाहाका लागि आवेदकले तोकिएको समयभित्रै ऋण मिनाहाका लागि छुट्टै आवेदन दिनुपर्ने सीपीए रिजालले जानकारी दिनुभएको छ ।